China Cold Yakagadzirwa Z Steel Sheet Pile Yekuvaka fekitori nevagadziri |Zhanzhi
Inotonhora yakaumbwa Z rudzi rwesimbi simbi mirwi 'maitiro ndeiyi: simbi billet inodziiswa uye inokungurutswa nenzira yakafanana neyekupisa-yakakungurutswa pepa murwi, asi pachinzvimbo chekuumbwa kuita mufurati, U, kana Z mapepa mirwi zvikamu zvichipisa, makoiri. vanosiiwa kuti vatonhore.Makoiri anopisa anotenderedzwa anobva amhanyiswa nepaguyo uye akaumbwa patembiricha yepakamuri achipinda muchimiro chekupedzisira cheZ.
4) Rudzi: Z mhando yepepa murwi
Kumwe kutonhora kwakagadzira Z simbi sheet pile size
1) Iyo hupamhi hwechikamu yakakura, uye murwi wekunyura murwi unoshamisa.
2) Chikamu modulus yakakura.
3) Iyo yepamusoro nguva ye inertia inosimudzira kuomarara kwesimbi pepa murwi wemadziro uye inoderedza deformation yechimiro.
4) Yakanakisa anti-corrosion maitiro.
5) Kuvaka kuri nyore uye nguva yekuvaka inopfupiswa.
6) Kushandisa simbi pepa murwi zvinhu zvinogona kurerutsa kuoma kwezvinhu zvekuongorora uye system zvinhu.
7) Zvimwe zvinowanikwa nyore nyore: Cold-Formed sheet piles inogadzirwa nepamusoro-soro pane inopisa-yakaputirwa mapepa emapuranga, kuwedzera nhamba yemazuva ekutenderera kusarudza kubva.Nguva yekugadzira yakajairika masvondo maviri
8) Mutengo-unoshanda: Cold-Yakaumbwa pepa murwi ingangoita 30-40% inodhura kugadzira pane inopisa-yakakungurutswa pepa murwi.
9) Kutakura kunodhura kutakura: Nekuda kwenhamba huru yevagadziri vemirwi yemapepa anotonhora, pane mukana wakakura wekuti unogona kuwana chigayo chiri pedyo kupfuura kana waizotenga mirwi yemapepa akakungurutswa.Pamusoro pezvo, iyo yakakura kusarudzwa kweanotonhora-akaumbwa mapepa mirwi anogona kukubvumidza iwe kuti uwane zvikamu zvine chikamu modulus padyo neako dhizaini dhizaini pasina kuwedzera kukuru kwehuremu.
10) Kuwedzera kuchinjika pakumisikidza: Inotonhora-yakaumbwa pepa murwi inovhara inobvumira kutenderera kwe 25-degree, pane kutenderera kwe7-kusvika-10-dhigirii inobvumidzwa neinopisa-yakakungurutswa pepa murwi uchishandisa bhora-ne-socket interlocks.
Cold yakaumbwa Z simbi murwi inoshandiswa zvakanyanya mumafashama purojekiti, chirongwa chekuvaka, kuvaka wharf uye zvichingodaro.